နေ့ရောညပါ အကြောက်တရားနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ထပ်တူခံစားရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Snap
အကယ်ဒမီ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ တစ်သားတည်းရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုက သူမကိုယ်တိုင် မိန်းမသားတစ်ယောက်ပီပီ ရှေ့တန်းကနေ ကြိုးစားနေသလို နေ့နေ့ညည အကြောက်တရားနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ထပ်တူခံစားရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုက “ညတိုင်းညတိုင်း ကြောက်လို့ငိုနေကြတဲ့ကလေးသူငယ်တွေ…. လုံခြုံမှုမရှိတော့လို့ ရရာလက်နက်ခေါင်းအုံးအောက်ခုပြီး အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေ….နင်တို့အေးချမ်းသာယာသော နိုင်ငံတော်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးမှာဆို….နင်တို့တကယ် ငါတို့ပြည်သူတွေအေးချမ်းသာယာတာကိုမြင်ချင်ရင် လက်နက်တွေ တင့်ကားတွေနဲ့မခြိမ်းခြောက်ဘဲနဲ့ ငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလေ….ငါတို့ပြည်သူတွေအားလုံး အကြောက်တရားတွေကနေ လွတ်ငြိမ်းပြီးအေးချမ်းသွားမှာ….” ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး ကြောက်လန့်နေရတဲ့ နေ့ရက်တွေ အမြန်ဆုံး ကုန်လွန်သွားစေဖို့ ဆုတောင်းပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက္ပါတယ်နော်။
အကယျဒမီ မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ လကျရှိဖွဈနတေဲ့ အရေးကိစ်စတှနေဲ့ ပကျသတျပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့ တဈသားတညျးရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ လှတျလပျမှုနဲ့ ဒီမိုကရစေီရရှိရေးအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ ပိုငျဖွိုးသုက သူမကိုယျတိုငျ မိနျးမသားတဈယောကျပီပီ ရှတေ့နျးကနေ ကွိုးစားနသေလို နနေ့ညေ့ည အကွောကျတရားနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ကလေးသူငယျတှေ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ ထပျတူခံစားရငျး စိတျမကောငျးဖွဈနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသုက “ညတိုငျးညတိုငျး ကွောကျလို့ငိုနကွေတဲ့ကလေးသူငယျတှေ…. လုံခွုံမှုမရှိတော့လို့ ရရာလကျနကျခေါငျးအုံးအောကျခုပွီး အိပျမပြျောတဲ့ညတှကေို ဖွတျသနျးနရေတဲ့အမြိုးသမီးတှေ….နငျတို့အေးခမျြးသာယာသော နိုငျငံတျောဖွဈအောငျဖနျတီးပေးမှာဆို….နငျတို့တကယျ ငါတို့ပွညျသူတှအေေးခမျြးသာယာတာကိုမွငျခငျြရငျ လကျနကျတှေ တငျ့ကားတှနေဲ့မခွိမျးခွောကျဘဲနဲ့ ငါတို့ခေါငျးဆောငျတှကေိုပွနျလှတျပေးလေ….ငါတို့ပွညျသူတှအေားလုံး အကွောကျတရားတှကေနေ လှတျငွိမျးပွီးအေးခမျြးသှားမှာ….” ဆိုပွီး ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသုကတော့ တဈနိုငျငံလုံး ကွောကျလနျ့နရေတဲ့ နရေ့ကျတှေ အမွနျဆုံး ကုနျလှနျသှားစဖေို့ ဆုတောငျးပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုက်ပါတယျနျော။
သူရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်သွားရပြီဖြစ်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျနေတဲ့ Sinon…..